မွနျ့မာရိုးရာ အိမျထောငျဖကျ ရှေးနညျး – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတမြား > မွနျ့မာရိုးရာ အိမျထောငျဖကျ ရှေးနညျး
မန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း🌀
အလွန်ဆိုးသော အတွဲ ဖြစ်သည်။ ၂ ဦးပေါင်းစည်းက စီးပွား ဖြစ်ထွန်းကိန်းမရှိ၊ ငွေကြေး စုဆောင်း၍ မရ။ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပဲ တရိရိနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေတတ်သည်။ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်ဝယ် ဟုသောကိန်းနှင့် အဆုံးသတ်ရမည်။ ကြိုးစားရှာဖွေလေခက်ခဲ ကျပ်တည်းသော အနေထားမျိုးဖြစ်လေ ဟုသာ။
အလွန်ကောင်းသော အတွဲဖြစ်သည်။ စီးပွားတက်မည်။အိမ်ထောင်ရေး သာယာချမ်းမြေ့မည်။ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊ ပြည့်စုံသာယာခြင်း၊အခွင့်လမ်း များစွာ ရရှိခြင်းများ ကြုံမည်။ဝန်ထမ်းများ ရာထူးဂုဏ်ရှိန် ကြီးမားမည်။မွေးဖွားသော သားသမီးများသည်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်။
နှစ်ဦးပေါင်းဖက်၍ ကောင်းသောကျော်ကြားခြင်းများ ရှိသော်လည်း၊ စီးပွားတွင် ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိ။ငွေ မည်မျှဝင်စေ ရသလောက်ပြန်ကုန်မည်။စီးပွားဖြစ်လိုက် ပြန်ကုန်လိုက်နှင့် ဘဝတူ အချင်းချင်းပင်မိမိက ပိုမို ချို့တဲ့သလိုဖြစ်နေမည်။
အထူးကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားအောင်မြင်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်း အထင်ရှားရှိမည်။ ဘဝတူတန်းတူများကြား အသာစီးရမည်။ လူတမ်းစေ့အထက် ပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရမည်။ တဦးသော်ကောင်း ၊ ၂ဦးလုံးသော်ကောင်း နမည်ကြီး ၊ ထင်ရှားကျော်ဇောခြင်းများ ရရှိမည်။မွေးဖွားသော သားသမီးမှလည်း ကျော်ဇောစေ၍အကျိူးပေးမည် ဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းစင်၍ ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံပြီး သာယာသော မိသားစု ဘဝလေးအား ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ရာထူးဂုဏ်ရှိန်မြင့်မားမည်။ အသက်ကြီးလေ စီးပွားတိုးလေဖြစ်ပါသည်။ ခြွေရံသင်းပင်းပေါများမည်။သားသမီးအကျိုး ခံစားရမည်။ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှု့မျိုး ကြုံရပေမည်။
အလွန်ဆိုးသော အတွဲဖြစ်သည်၊ ပင်ပန်းကြီးစွာနှင့် စီးပွား ဥစ္စာ ရှာဖွေရမည်။ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်သည့် နဂိုကာလမှစ၍ တဖြေးဖြေးကျဆင်းစေတက်သည်။ ဝင်သမျှငွေမှာအဖက်မတင်စေတတ်ပါ၊ အကျိုးမြတ်ရရှိ၍ စီးပွားဖြစ်ထွန်းလာသော်ငြားလည်း တခုမဟုတ်တခု စိတ်သောကရောက်စရာများ ကြုံစေတတ်သည်။
မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် ဆိုးသောအတွဲများထဲတွင် ပါဝင်နေပါက ၊ စိတ်အနောက်ယှတ်ကြီးစွာဖြစ်ရန်မလိုပဲ ကံ၊ဥာဏ်၊ဝီရိယ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြင့် မျက်မှောက်ဘဝကို ဖြတ်သန်းသော် ဒုက္ခဆင်းရဲကင်းစင်နိုင်ပါကြောင်း……….
Copy ကူးယူတင်ပါသည် ။
မှနြ့မာရိုးရာ အိမထြောငဖြကြ ရှေးနညြး
အမွိုးသားနံ နှငြ့ အမွိုးသမီးနံ နှစခြု ပေါငြးရမညြ။
ဥပမာ.. တနငျြဂနှေ(၁) +ဗုဒျဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖှစသြညရြလဒကြို ၅ဖှငြ့ မှောကရြမညြ ။ ၂၅ ရသညြ။ထို့၂၅ အား ၇ ဖှငြ့စားရမညြ။ အကှငြး ၄ ရပါသညြ။ထို့နောကြ အကှငြး ၄ ဟောကိနြးအား ဖတရြမညဖြှစသြညြ။
၁ကှငြး ။ ကှငြးဧက စှဲမကဖြှယြ မှဲတတတြယြ မယိမြး။
အလှနဆြိုးသော အတှဲ ဖှစသြညြ။ ၂ ဦးပေါငြးစညြးက စီးပှား ဖှစထြှနြးကိနြးမရှိ၊ ငှကှေေး စုဆောငြး၍ မရ။ကောငြးကွိုး ဖှစထြှနြးခှငြးမရှိပဲ တရိရိနှငြ့ ဆငြးရဲမှဲတတတေသြညြ။ တူနှစကြိုယြ တဲအိုပကွဝြယြ ဟုသောကိနြးနှငြ့ အဆုံးသတရြမညြ။ ကှိုးစားရှာဖှလခေကေခြဲ ကပွတြညြးသော အနထေားမွိုးဖှစလြေ ဟုသာ။
၂ကှငြး ။ ရှိအထငြ ဒှိမှငကြိနြး နှစသြိနြးလောကကြှယရြာ။
အလှနကြောငြးသော အတှဲဖှစသြညြ။ စီးပှားတကမြညြ။အိမထြောငရြေး သာယာခမြွးမှမေ့ညြ။ကှယဝြခမြွးသာခှငြး၊ ပှညြ့စုံသာယာခှငြး၊အခှငြ့လမြး မွားစှာ ရရှိခှငြးမွား ကှုံမညြ။ဝနထြမြးမွား ရာထူးဂုဏရြှိနြ ကှီးမားမညြ။မှေးဖှားသော သားသမီးမွားသညလြညြးကှယဝြပှညြ့စုံမညြ။
၃ကှငြး ။ ရှသေီတာစုံပွံမှေး၊ ဂုဏဟြနြ့သေး ဆငြးရဲလိမြ့သာ။
နှစြဦးပေါငြးဖကြ၍ ကောငြးသောကွောကြှားခှငြးမွား ရှိသောလြညြး၊ စီးပှားတှငြ ဖှစထြှနြးခှငြးမရှိ။ငှေ မညမြွှဝငစြေ ရသလောကပြှနကြုနမြညြ။စီးပှားဖှစလြိုကြ ပှနကြုနလြိုကနြှငြ့ ဘဝတူ အခငြွးခငြွးပငမြိမိက ပိုမို ခွို့တဲ့သလိုဖှစနြမညြေ။
အလုပစြီးပှားတှငြ အောကကြွ သလိုဖှစပြှီးမှ တောသြငြ့ရုံပှလညေမြညြ။ နှစြဦးပူးတှဲနကေ ငှကေုနမြွားမညြ၊လုပငြနြးသဘောအရ ခှဲခှာ လုပကြိုငကြ ငှစေုဆောငြးမိမညြ။သားသမီးမွားအား ပငပြနြးဆငြးရဲစှာ ပွိုးထောငရြမညြ။သားသမီးကောငြးကွိုးကိုဖှငြ့ ခံစားရမညြ။
၄ကှငြး ။ လေးစတု ထငရြှားစှာ။
အထူးကောငြးသော မိတဖြကဖြှစသြညြ။ ကွောကြှားအောငမြှငခြှငြး၊ စီးပှားဖှစထြှနြးခှငြး အထငရြှားရှိမညြ။ ဘဝတူတနြးတူမွားကှား အသာစီးရမညြ။ လူတမြးစအေ့ထကြ ပှညြ့စုံစှာနထေိုငရြမညြ။ တဦးသောကြောငြး ၊ ၂ဦးလုံးသောကြောငြး နမညကြှီး ၊ ထငရြှားကွောဇြောခှငြးမွား ရရှိမညြ။မှေးဖှားသော သားသမီးမှလညြး ကွောဇြောစေ၍အကွိူးပေးမညြ ဖှစသြညြ။
🔢၅ကှငြး ။ ကှကဇြီဝါ ဆငြးရဲကငြး။
အလှနကြောငြးသော မိတဖြကဖြှစပြါသညြ။ ဆငြးရဲခှငြး ကငြးစငြ၍ ကှယဝြ ပှညြ့စုံပှီး သာယာသော မိသားစု ဘဝလေးအား ပိုငဆြိုငမြညဖြှစသြညြ။ ဝနထြမြးဖှစပြါက ရာထူးဂုဏရြှိနမြှငြ့မားမညြ။ အသကကြှီးလေ စီးပှားတိုးလဖှစေပြါသညြ။ ခှရေံသငြးပငြးပေါမွားမညြ။သားသမီးအကွိုး ခံစားရမညြ။ ရရှညေတြညတြံ့ ခိုငမြှဲမှု့မွိုး ကှုံရပမညြေ။
၆ကှငြး။ ပှငပြပူးမငြးက သူဌေးမှနြ ငှိမြးလိမြ့နှစတြနြ။
နှစြဦးပေါငြးဖကကြ သူဌေးသူကှယဘြဝ ရရှိမညြ။ ထီပေါကခြှငြး ၊ အမှရခှေငြး ၊ ငှအစေုလိုကြ ဝငခြှငြး၊ငှကှေေးစုဆောငြးမှု့မွား ရှိကာ ပေး၍မကုနြ လှူ၍မခနြးဖှစမြညြ။ အတှငြးမီး အပှငမြီး ငှိမြးအေး၍ လောကီလောကုတျတရာနှစဖြှာသော ကုသိုလအြကွိုးမွား ခံစားရမညြ။ သားသမီးမွား ကောငြးကွိုး ခံစားရမညြ။
ဝှကှငြး။ သုညကနွလြွှငြ လုံမမောငနြှံ အို ဆုံးနိုငမြွှလေး။
အလှနဆြိုးသော အတှဲဖှစသြညြ၊ ပငပြနြးကှီးစှာနှငြ့ စီးပှား ဥဈစာ ရှာဖှရမေညြ။ နှစြဦးပေါငြးဖကသြညြ့ နဂိုကာလမှစ၍ တဖှေးဖှေးကဆွငြးစတကေသြညြ။ ဝငသြမွှငှမှောအဖကမြတငစြတတေပြါ၊ အကွိုးမှတရြရှိ၍ စီးပှားဖှစထြှနြးလာသောငြှားလညြး တခုမဟုတတြခု စိတသြောကရောကစြရာမွား ကှုံစတတေသြညြ။
မိတဆြှေ အနဖှငြေ့ ဆိုးသောအတှဲမွားထဲတှငြ ပါဝငနြပေါက ၊ စိတအြနောကယြှတကြှီးစှာဖှစရြနမြလိုပဲ ကံ၊ဉာဏြ၊ဝီရိယ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးဖှငြ့ ပှညြ့စုံစှာဖှငြ့ မကွမြှောကဘြဝကို ဖှတသြနြးသြော ဒုကျခဆငြးရဲကငြးစငနြိုငပြါကှောငြး……….🤗
မှတသြားဖူးသော ပညာရပတြခုအား တငပြှပေးခှငြုးဖှစပြါသညြ။
ခမြွးသာ ကိုယစြိတြ မှဲကှပါစေ ။
Copy ကူးယူတငပြါသညြ ။
Previous Article ဟိုတယျအခနျးနံပါတျ ၃၉ (မိနျးခလေးမြားမဖတျရ)
Next Article သိသိသာသာ အသားအရညျပိုကွညျလာစမေယျ့ Detox Water ပွုလုပျနညျး….